31 March 2022 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဟောလိဝုဒ်ရှိ Dolby ကဇာတ်ရုံတွင် ကျင်းပသည် ၉၄ ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲတွင် စင်မြင့်ပေါ်၌ မင်းသား ဝီလ်စမစ်က အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ ခရစ်ရော့ခ်ကို ပါးရိုက်လိုက်စဉ် / AFP
၂၀၂၂ ခုနှစ်၏ အော်စကာဆုပေးပွဲကို ဝီလ်စမစ်က အပိုင်စီးသွားခဲ့သည်ဟု မှတ်ချက် ပြုရလောက်သည် အထိ ဝီလ်စမစ်၏ သတင်းက ကမ္ဘာအနှံ့ အတော်လေး ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။
အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ကြသလို ဝေဖန်မှုများလည်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်‌နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော အော်စကာဆုပေးပွဲတွင် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဟာသပညာရှင်၊ သရုပ်ဆောင် ခရစ်ရော့ခ်ကို ဝီလ်စမစ်က စင်ပေါ်တက်၍ ပါးရိုက်ခဲ့ရာက စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ခရစ်ရော့ခ်က ရောဂါကြောင့် ဆံပင်များ ကျွတ်ထားပြီး ခေါင်းရိတ်ထားသော ဝီလ်စမစ်၏ ဇနီး ဂျေဒါ ပင့်ကတ် စမစ်ကို ‘G.I. Jane’ ဆိုသည့်ရုပ်ရှင် အပိုင်း (၂) တွင် ဝင်သရုပ်ဆောင်တာ မြင်ချင်သည်ဟု စနောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီမီမိုး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည့် G.I. Jane ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပိုစတာ
‘G.I Jane’ ရုပ်ရှင်၏ အဓိက ဇာတ်ကောင်ကို သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ဒီမီမိုးက ခေါင်းတုံးဆံပင်ဖြင့် ပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ခရစ်ရော့ခ်၏ ဟာသလုပ် ပြောဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ် မင်းသား ဝီလ်စမစ်က မကျေနပ်၍ စင်ပေါ်သို့တက်၍ ပါးရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သူ့မိန်းမ၏ နာမည်ကို ထပ်မံပြောဆိုခြင်း မပြုရန် စင်အောက်မှ အော်ဟစ်ခဲ့ပါသေးသည်။ ထိုညတွင်ပင် ဝီလ်စမစ်သည်လည်း အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့သေးသည်။
ရုပ်သံများတွင် တိုက်ရိုက်တင်ဆက်နေသော အစီအစဉ်ဖြစ်သည့်အတွက် တခဏအတွင်းမှာပင် ၎င်းသတင်းမှာ မီဒီယာများနှင့် လူမှုမီဒီယာများပေါ်တွင် ကမ္ဘာ့အနှံ့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ ပရိသတ်များအကြားတွင် ဇာတ်ညွှန်းဖြင့် တင်ဆက်နေခြင်းလား၊ အမှန်တကယ် ဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းလား ဆိုသည်ကိုပင် ဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။
သို့သော် အော်စကာ အကယ်ဒမီပေးပွဲ နောက်ရက်တွင် အပြန်အလှန် တောင်းပန်ကြ၊ အကယ်ဒမီပေးပွဲကလည်း ဝီလ်စမစ်၏ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချကြောင်းနှင့် ၎င်းလုပ်ရပ်အပေါ် စုံစမ်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်များကြောင့် အမှန်တကယ်ဖြစ်သည့် ဖြစ်ရပ်ဟု ယူဆနိုင်သည်။
၎င်းသတင်းနှင့် ပက်သက်၍ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့အနှံ့မှ ပရိသတ်များ အမျိုးမျိုး တုံ့ပြန်ကြရာ အဓိက တုံ့ပြန်ပုံကွဲပြားချက်ကို ဆက်စပ်ဆွေးနွေးလိုသည်။
ခရစ်ရော့ခ်ကို ပါးရိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက် ထိုပွဲတွင်ပင် ဝီလ်စမစ်သည် Richard ဇာတ်ကားဖြင့် အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင် အော်စကာဆု ရရှိခဲ့သည် / AFP
ဖွံ့ဖြိုးပြီး အနောက်နိုင်ငံကြီး အများစုက ခရစ်ရော့ခ်၏ တပါးသူ အားနည်းချက်အပေါ် ဟာသလုပ်ပြောဆိုသော လုပ်ရပ်အပေါ် မထောက်ခံသော်လည်း၊ ဝီလ်စမစ်၏ တုံ့ပြန်ပုံကို အဓိကထား ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြသည်။ ၎င်းလုပ်ရပ်က အကြမ်းဖက်မှု မြောက်သည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။ မည်သို့သော ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကြမ်းဖက်မှုမျိုးမှ ယဉ်ကျေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လက်ခံနိုင်စရာမရှိ၊ ဆင်ခြေပေးနိုင်ခြင်းမရှိဟု တုံ့ပြန်ကြသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းပွဲကို တိုက်ရိုက်ကြည့်နေသော ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်များတွင် ပြဿနာတခုကို ဤသို့ဖြေရှင်းရသည်ဟု အတုယူမှားဖွယ်ဖြစ်မှာပင် ကြောက်ရသည်ဟု ဝေဖန်ပြောဆိုကြသည်။
ဝီလ်စမစ်အနေဖြင့် ၎င်း၏ဇနီးအပေါ် ဟာသလုပ်သော လုပ်ရပ်ကို မကျေနပ်လျှင်ပင် လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်၊ ငြိမ်းချမ်းသော နည်းလမ်းဖြင့်၊ နှုတ်အားဖြင့် ဖြေရှင်း၍ ရနိုင်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုကြသည်။ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်ခြင်းမှ အပ အခြားသော မည်သည့်အခြေအနေတွင်မှ လက်ခံစရာမရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးသော အနောက်နိုင်ငံအများစုက ဤကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုကို လက်မခံကြ၊ ကန့်ကွက်ကြပုံကို မြင်ရသည်။ ထိုသို့သော တုံ့ပြန်မှုများ၊ ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လာပြီးနောက် မင်းသား ဝီလ်စမစ်သည် ၎င်း၏ လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှတဆင့် ၎င်း၏ လုပ်ရပ်မှာ အကြမ်းဖက်မှု မြောက်နေပြီး၊ မည်သို့မှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိသဖြင့် တောင်းပန်ကြောင်းနှင့် ခရစ်ရော့ခ်ကိုလည်း တောင်းပန်ကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။
ဝီလ်စမစ်၊ ဂျေဒါ ပင့်ကတ် စမစ်နှင့် ခရစ်ရော့ခ်
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပရိသတ်အများစု၏ တုံ့ပြန်ပုံမှာ ကွဲပြားသည်။ ဝီလ်စမစ်၏ လုပ်ရပ်ထက် ခရစ်ရော့ခ်၏ တပါးသူ အားနည်းချက်အပေါ် လှောင်ပြောင်ခြင်းကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ကြသည်။ ထို့အပြင် ဝီလ်စမစ်၏ ဖြေရှင်းပုံကို ထောက်ခံကြ၊ သဘောကျနှစ်သက်ကြသည်။ မိသားစုကို ဤသို့ ကာကွယ်သင့်ကြောင်း၊ ပါးရိုက်တာ တချက်တည်းကပင် နည်းနေသေးကြောင်း စသည်ဖြင့် ဝီလ်စမစ်၏ လုပ်ရပ်ကို အကြမ်းဖက်မှုမြောက်သည်ဟု မမြင်ဘဲ ဟီးရိုးအဖြစ်မြင်ကြသည်။
ကျနော်တို့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းက အကြမ်းဖက်မှု လုပ်ရပ်တခုကို အကြမ်းဖက်မှု မြောက်သည်ဟု မမြင်ရလောက်တော့သည်အထိ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ယဉ်ပါးလာခဲ့ကြပြီလား။ ထို့သို့ ယဉ်ပါးလာစရာ နောက်ခံ အကြောင်းအရင်းများလည်း ရှိနေသည်မို့ လူထုကိုသာ လုံးဝဉဿုံ အပြစ်ပုံမချရက်။
မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ပြဿနာတခုခုကို ဖြေရှင်းရာတွင် အကြမ်းဖက်ခြင်းနည်းလမ်းက လက်မခံနိုင်စရာဟု မမြင်ကြတော့။ ရပ်ကွက်ထဲ ပစ္စည်းခိုးသူမိလျှင် ဝိုင်းရိုက်ပစ်လိုက်ကြမည်။ ထိုသို့ဖြေရှင်းခြင်းကို လူထုက ထောက်ခံကြသည်။ တချို့လည်း လက်လွန်ခြေလွန် ဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကို စော်ကားသည်ဟု ယူဆလျှင် ဝိုင်းရိုက်ပစ်လိုက်ကြမည်ဟု စဉ်းစားသည်။ ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်း၊ တရားဥပဒေဖြင့် လူသားဆန်စွာ ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်းကို မရွေးချယ်ကြတော့ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့ထက်တိုင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တရားသောဥပဒေ၊ ဥပဒေကို စည်းကြပ်မည့် တရားသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၎င်းဥပဒေများအတိုင်း တရားသဖြင့် အမိန့်ချမှတ်မည့် တရားသောရုံး၊ တရားသူကြီးများ ကင်းမဲ့နေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤသို့ဖြစ်လာရသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့ထက်တိုင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တရားသောဥပဒေ၊ ဥပဒေကို စည်းကြပ်မည့် တရားသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၎င်းဥပဒေများအတိုင်း တရားသဖြင့် အမိန့်ချမှတ်မည့် တရားသောရုံး၊ တရားသူကြီးများ ကင်းမဲ့နေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥပဒေများကလည်း တရားသောဥပဒေက နည်းလှသည်။ ကြီးကြပ်သော အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ဥပဒေကို ကြီးကြပ်ခြင်းထက် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်က အကျင့်ပျက်ခြစားကြသည်။ တရားသူကြီးများကလည်း နီးရာဓားကြောက်ကြခြင်း၊ လာဘ်စားမှုများဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျင်လည်နေခဲ့ကြသည်။
၎င်း၏ အကျိုးဆက်မှာ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် ပြဿနာတခုကို တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဖြေရှင်း၍ တရားမျှတသော ရလဒ်ထွက်လာမည်ဟု မယုံကြည်ကြတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် တရားမျှတမှုကို ရယူရန်သာ ကြိုးစားကြတော့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် စစ်အာဏာသိမ်းမှု နောက်ပိုင်းတွင် ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကို ကျူးလွန်လာသူမှာ နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင် လက်နက်တပ်ဆင် ဖွဲ့စည်းထားသော စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပင် ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ရန် ခုခံစစ်၊ မလွှဲမရှောင်သာ လက်နက်ကိုင် ခုခံတော်လှန်နေကြရသည်။
မိမိတို့ ပြဿနာကို မိမိတို့ဖာသာ ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားရင်း အကြမ်းဖက်မှုကို အကြမ်းဖက်မှုမြောက်သည်ဟု မမြင်တော့ဘဲ ခုံမင်သွားလျှင် ယဉ်ကျေးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် အန္တရယ်များနိုင်သည်။
ဤသို့သော အခြေအနေအောက်တွင် ရှင်သန်နေရာသော လူ့အဖွဲ့အစည်းက ဝီလ်စမစ်၏ တုံ့ပြန်ပုံကို သူရဲကောင်းဆန်သည်ဟု ထင်ကြသည်မှာ အပြစ်ဆိုနိုင်ရန် ခက်လှသည်။ သို့သော် မိမိတို့ ပြဿနာကို မိမိတို့ဖာသာ ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားရင်း အကြမ်းဖက်မှုကို အကြမ်းဖက်မှုမြောက်သည်ဟု မမြင်တော့ဘဲ ခုံမင်သွားလျှင် ယဉ်ကျေးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် အန္တရယ်များနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် သတင်းပေးဟု သံသယရှိရုံဖြင့် မှားယွင်းစွာ သတ်ဖြတ်မှု၊ CDM မလုပ်ရုံမျှဖြင့် လုပ်ကြံမှု၊ ရပ်ရွာအတွင်း ခိုးဆိုးလုနှိုက်သည်ကို ဖမ်းမိရုံဖြင့် လက်လွန်ခြေလွန် ကိုယ်တိုင်တရားစီရင်မှုများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အန္တရာယ်များသော တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများဖြစ်သည်။
တဖက်တွင် ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းသော အဖွဲ့အစည်းက ကျူးလွန်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကျူးလွန်မှုများကို နိုင်ငံတကာ တရားစီရင်ရေးများက ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း မည်သည့်ယဉ်ကျေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းကမှ မထောက်ခံကြ၊ လက်မခံကြပေ။
ထို့အတူ ၎င်းတို့ကို တော်လှန်နေသော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ အရပ်သားများအပေါ် လက်လွန်ခြေလွန် ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ကျူးလွန်နေလျှင် မည်သည့် ယဉ်ကျေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းကမှ ထောက်ခံကြတော့မည်မဟုတ်။
ထို့အပြင် မိမိတို့တော်လှန်နေသည်မှာ ရိုင်းစိုင်းသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် မနေလိုကြခြင်း၊ ယဉ်ကျေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကောင်အထည် ဖော်လိုကြခြင်းကြောင့် တော်လှန်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့တွင် တော်လှန်ရေးကတဖက်၊ ယဉ်ကျေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အုတ်မြစ်ချ တည်ဆောက်ရေးတဖက် တာဝန်နှစ်ခုကို တပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်နေကြရခြင်း ဖြစ်သည်ကို သတိချပ်စေလိုပါသည်။
(တင်မြင့်သည် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်ကို ဘွဲ့လွန်ဆည်းပူးလေ့လာခဲ့ပြီး လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနစာတမ်းများ ရေးသားခြင်းနှင့် လေ့လာသုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါးများကို ရေးသားလျက်ရှိသည်။)
Topics: CDM, G.I. Jane, ခရစ်ရော့ခ်, ဂျေဒါ ပင့်ကတ် စမစ်, စစ်အာဏာသိမ်းမှု, တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု, ဒီမီမိုး, လူမှုမီဒီယာ, ဝီလ်စမစ်, ဟောလိဝုဒ်, အကြမ်းဖက်မှု, အော်စကာဆုပေးပွဲ